Faafida cudurka cusub ee loo yaqaan ‘coronavirus’, oo illaa 14-kii Sebtember, ay ku dhinteen in ka badan 928,000 oo qof adduunka, ayaa saameyn ku yeeshay dhacdooyinka isboorti ee adduunka oo dhan, sida lagu sheegay xog ay soo uruurisay Jaamacadda Johns Hopkins.
Maaddaama tirada kiisaska loo yaqaan ‘coronavirus’ ee adduunka oo dhan ay gaareen in ka badan 29.2 milyan, munaasabadaha waaweyn ee isboorti waa la joojiyay ama dib loo dhigay.
Midka ugu muhiimsan ee xagaagan ka dhici lahaa Japan wuxuu ahaa Tokyo 2020 Olympics.
Isboortiga adduunka ayaa wajahaya ‘aan horay loo arag’ imtixaan iyadoo la adeegsanayo cudurka ‘coronavirus’
Coronavirus: Waa kuwee wadamada xaqiijiyay kiisaska?
‘Ciyaar ka baxsasho’: Sidee ciyaaruhu ula tacaalayaan cudurka faafa ee coronavirus
Si kastaba ha noqotee, Guddiga Olimbikada Caalamiga ah iyo Ra’iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa dib u dhigay munaasabadda sanadka soo socda, halkaasoo ay hadda ka dhici doonto 23-ka July illaa 8-da 8, 2021.
Koonfurta Kuuriya, xilli ciyaareedkii kubbadda cagta ayaa dib loo bilaabay 8dii Maajo ka dib dhowr toddobaad oo dib loo dhigay, iyadoo kooxda heysata horyaalnimada Jeonbuk Motors ay martigelisay Suwon Bluewings garoon madhan oo Koobka Adduunka ah oo ku yaal Jeonju.
Jarmalka gudahiisa, Bundesliga ugu sareeya ayaa dib u bilaabay xilli ciyaareedkiisii ​​16-kii May isagoo albaabada u xirnaa kadib labo bilood oo hakad uu galay.
Horyaalka Ingiriiska, Serie A-da Talyaaniga, Horyaalka Spain ee La Liga iyo Super Lig-ga Turkiga ayaa lagu wadaa inay dib u bilowdaan bisha June ka dib ganaax seddex bilood ku dhow.
Horyaalka Kubadda Cagta ee Horyaalka Mareykanka ee Major League Soccer (MLS) ayaa kordhiyay dib u dhigista kulamada dalka ilaa ugu yaraan 8-da Juun sababo la xiriira cudurka faafa ee coronavirus.
Coronavirus: Orodka maratoonka ee qufulka lagu xidho
12-kii Abriil, Xiriirka Kubadda Cagta ee Afrika (CAF) ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigay labadii lugood ee semi-finalka koobka horyaalada qaaradda Afrika oo la rabay in la qabto bisha May.
“Marka la eego walaaca sii kordhaya iyo dabeecadda isbeddelka ee COVID-19 (taas oo horseeday) xirnaanshaha dalal badankood, Guddiga Gurmadka degdegga ah ee CAF ayaa go’aansaday in dib loo dhigo kulamada illaa ogeysiis dheeri ah,” ayaa lagu yiri bayaan.
CONCACAF (Xiriirka Kubadda Cagta ee Waqooyiga, Bartamaha Ameerika iyo Kariibiyaanka Xiriirka Kubadda Cagta) Nations League, oo lagu waday inuu dhaco Juun 4 ilaa Juun 7, waa la hakiyay. Finalka, oo ay ku tartamayaan Costa Rica, Honduras, Mexico iyo Mareykanka oo lagu qaban doono aagga Houston iyo Dallas ee Texas, ayaa dib loo balamay taariikhda dambe ee goobaha la go’aamin doono.
Kubadda cagta Ruushka ayaa sidoo kale la hakiyay. Xiriirka Kubadda Cagta ee Ruushka ayaa isku raacay in si deg deg ah loo joojiyo dhammaan tartamada kulan ay yeesheen 17-kii Maarso.
Finalka Koobka Belgian ee dib loo dhigay ayaa dib loo dhigay bisha Ogosto 1. Taasi waa hal usbuuc ka hor bilowga horyaalka xilli ciyaareedka soo socda.
Tartanka Qaramada Afrika ee 2020 oo loo qorsheeyay inuu bisha Abriil ka dhaco Cameroon ayaa dib loo dhigay waqti aan la cayimin, Xiriirka Kubadda Cagta ee Afrika ayaa ku sheegay bayaan ay soo saareen 17-kii Maarso.